Mushure memazuva makumi mana kwenguva refu China Chinese Mutambo Zororo, inotungamirwa naCovid-19, Forsetra yakadzoka zvakare ikavhurwazve kugadzirwa musi wa20 th yaFeb. Yakanganiswa neCritential hit yeCoronavirus, vashandi vacho vakatadza kunyatso patsva, uye vasingakwanisi kupa vatapi vedu mari, YET nekuvimba nerutsigiro kubva kune vatengi vedu, takaburitsa uye takatumira zvidimbu zvinopfuura mazana mazana maviri emabwe zvakabikwa. matenga edenga kune dzimwe nyika mukati memwedzi mumwe.
Wese munhu arikuti hupfumi hwacho hwakashandawo hwakashata pasirese, kunyanya kutengesa kunze kwenyika. Isu takazvinzwa asi tiri kubata zvakanaka nazvo nekuda kweiyo yepamusoro-sosi chigadzirwa chatinogadzira uye inozivikanwa kuzivikanwa mumunda. Hupenyu hausi nyore asi haumbomira, tinofanirwa kuenderera mberi nahwo tigoita kuti huve nani.
Isu ngatinamatirei zuva rekubvisa masiki edu uye nekufema mweya mutsva wekunze kuti uuye nekukurumidza. Forsetra Roof Matiles ,fukidza imba yako nekuchengetedza iwe kubva kuVirusi panguva yeCovid-19 ----- Denga rako ibasa rehupenyu hwedu !!!
Nguva yekutumira: Kubvumbi-17-2020